Otú Anyị Ga-esi Na-ekpegara Chineke Ekpere |Ihe Baịbụl Kwuru
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bengali Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Nepali Norwegian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
È nwere onye na-anụ ekpere anyị?
“Gị Onye na-anụ ekpere, ọ bụ gị ka anụ ahụ́ niile bụ́ mmadụ ga-abịakwute.”—Abụ Ọma 65:2.
Ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu na ọ dị ka Chineke anaghị anụ ekpere. Ndị ụwa na-atụ n’ọnụ nwere ike ịna-eche na Chineke anaghị anụ ekpere ha.
Baịbụl kwuru, sị: “Anya Jehova na-elekwasị ndị ezi omume, ntị ya dịkwa n’arịrịọ ha na-arịọsi ike; ma ihu Jehova na-emegide ndị na-eme ihe ọjọọ.” (1 Pita 3:12) N’eziokwu, Chineke na-anụ ekpere. Ma, ọ bụ ekpere ndị na-eme ihe ọ na-achọ ka ọ kacha anụ. Amaokwu Baịbụl ọzọ gosikwara na Chineke na-anụ ekpere anyị. Ebe ahụ sịrị: “Obi ike anyị nwere n’ebe ọ nọ bụ na ihe ọ bụla nke anyị rịọrọ ya dị ka uche ya si dị, ọ na-anụ olu anyị.” (1 Jọn 5:14) N’ihi ihe amaokwu Baịbụl a kwuru, onye ọ bụla chọrọ ikpegara Chineke ekpere kwesịrị ịma ma ihe ọ na-arịọ ya ọ̀ dabakwara n’ihe bụ́ uche Chineke.
Olee otú anyị kwesịrị isi na-ekpe ekpere?
“Mgbe ị na-ekpe ekpere, ekwughachila otu ihe ugboro ugboro.”—Matiu 6:7.
Ọ na-abụ ndị Buda, Katọlik, Hindu na ndị Alakụba kpewe ekpere, ha ejiri chaplet na-agụghachi ekpere ha bu n’isi.
Ihe anyị na-ekpe n’ekpere kwesịrị ịbụ ihe si anyị n’ala ala obi, o kwesịghị ịbụ ihe anyị bu n’isi nke anyị ga na-ekwughachi ugboro ugboro. Baịbụl gwara anyị, sị: “Mgbe ị na-ekpe ekpere, ekwughachila otu ihe ugboro ugboro, dị ka ndị mba ọzọ na-eme, n’ihi na ha na-eche na a ga-anụ olu ha n’ihi ọtụtụ okwu ha na-ekwu. Ya mere, unu emela ka ha, n’ihi na Chineke bụ́ Nna unu maara ihe ndị na-akpa unu tupu unu arịọ ya.”—Matiu 6:7, 8.
IHE O JI GBASA ANYỊ
Onye na-ekpe ekpere otú na-adịghị Chineke mma nwere ike ịbụ oge ka ọ na-egbu ma ọ bụ ya abụrụ na ọ na-akpasu Chineke iwe. Baịbụl kwuru na ekpere ndị na-anaghị eme ihe Chineke chọrọ bụ “ihe arụ” n’anya ya.—Ilu 28:9.
Ònye ka anyị kwesịrị ịna-ekpegara ekpere?
“Chọọnụ Jehova ugbu a a pụrụ ịchọta ya. Kpọkuonụ ya ugbu a ọ nọ nso.”—Aịzaya 55:6.
Ụfọdụ ndị na-ekpegara Meri ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụkwanụ ndị sent ekpere. Ihe mere ha ji na-ekpegara ha ekpere bụ na ha chere na ha ga-enye aka na-arịọrọ ha Chineke arịrịọ.
Ọ bụ “Nna anyị nke bi n’eluigwe” ka ndị na-efe Chineke kwesịrị ịna-ekpegara ekpere. (Matiu 6:9) Baịbụl gbara anyị ume ka anyị ghara ‘ichegbu onwe anyị banyere ihe ọ bụla, kama n’ihe niile, ka anyị jiri ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike na inye ekele mee ka Chineke mara ihe anyị na-arịọ.’—Ndị Filipaị 4:6.
Gụọ ihe atụ abụọ Jizọs mere na Luk isi 11, bụ́ ndị kọwara otú ị ga-esi na-ekpe ekpere obi esie gị ike na Chineke ga-anụ ya.